Unoda Kushanda Naani? | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 2, 2009 NeChishanu, Gumiguru 2, 2009 Douglas Karr
Ndanga ndichishanda zvisina simba mavhiki mashoma apfuura kuti ndibvise bhizinesi rangu pasi. Mazuva anopedzwa kuita network uye manheru / kupera kwevhiki kunoshandiswa kuendesa pane zvisungo zvandakaita. Izvo hazvisi kuenda zvakakwana, asi zviri kufambira mberi. Mune ino hupfumi, ndakanaka nazvo.
Kutengesa kudzidzisa yakabatsira zvishoma - ichindibatsira kuti ndinzwisise zviri kudiwa nevatengi vangu, kumisa tarisiro navo, uye nekuvhara nekukurumidza kuti zvinhu zvirege kudhonza kana kundinonotsa Ndiri kufamba nekukurumidza, kickin 'butt uye kutora mazita. Hapana munhu akabatsira kundikurudzira kupfuura shamwari dzangu, zvakadaro!
Nhasi tanga tine kukunda kukuru. Iwo mabhizinesi akati wandei andanga ndichishanda nawo zvakanyatsobatsira mukuvhara mukana wekuvimbisa netoni yezvingaitika. Imwe kambani hombe yandave ndichishanda nayo kwenguva yakati yakasaina kondirakiti diki yekuyedza kugona kwedu uye kuona zvatingavaitire. Ndinogara ndichionga.
Shamwari dzangu dzakafara padzakanzwa nhau! Ishamwari dzangu dzepedyo idzo dzave dzichindikurudzira kusvika apa, dzichindikurudzira, dzichinditsigira, dzichindipa zvinotungamira, uye kuvapo pandaida rubatsiro Ivo havana kukumbira a vendu uye usatarisira kana dhiri. Vanoziva kuti wechipiri ndine bhizinesi rakaringana rekufamba, tinenge tichishanda pamwe chete.
Vamwe vakatora imwe nzira. Chakanyanya kunetsa ndechekuti kambani wandine hanya naye zvakanyanya nekundidhonza parutivi uye kubvunza kuti sei ndisina kuwana chigadzirwa chavo mukutengesa. Ndakakatyamadzwa pakutanga, ikozvino ndatsamwa chaizvo. Ndapedza makore gumi apfuura muIndipolis ndichiita kuti mabhizinesi aya abudirire, ndichivabatsira pasina muripo pavakabvunza, nekuvasimudzira pamukana wese.
Ini handina kuvasimudzira nekuti ndaifunga kuti yaizondiitira mari. Ndakazviita nekuti ndaida kuona makambani achibudirira, vanhu vazhinji vachishanda, uye vachiona dunhu richikura. Vaive shamwari dzangu, uye ndinofarira shamwari dzangu kuti dzibudirire.
Unoda kushanda naani? Iwe unoda kuzvikomberedza nevanhu vari mubishi kuchengeta mamaki, kunetseka nezve izvo zvauri kuvakwereta, kana izvo zvauchazowana ivo? Kana iwe unoda kushanda nevanhu vanoziva kuti zvirinani mumwe nemumwe wedu anobudirira, zvirinani isu tese tichava mukufamba kwenguva?
Chokwadi ndechekuti ndichave nenguva yakaoma kusimudzira iyo kambani inotevera nguva iyo rudyi mukana unouya. Ini zvino ndonzwisisa kuti ivo vanondiona chete sechishandiso chekutora yavo '. Izvo zvinoodza moyo asi ndakanaka nazvo… Ndine dzimwe shamwari zhinji dzakandifadza nhasi.
Ini ndichave nechokwadi chekuti ndinotarisira shamwari dzangu kutanga. Vanhu ivavo ndivo vandinoda kushanda navo.
Gumiguru 2, 2009 na6: 29 PM
Wataura zvakanaka, Doug. Bhizinesi rinopfuura bhizinesi chete. Ndihwo hukama.
Gumiguru 3, 2009 pa 4:40 AM
Chidimbu chikuru Doug. Hatina kukwanisa kubvumirana newe zvakanyanya.
Gumiguru 4, 2009 na9: 30 PM
Makorokoto zvakare pakutora mukana, kwauri nedzimwe shamwari dzangu dzanga dzirimo. Zvinonakidza kuona bhizinesi rako richikura! Usambofa wakakura zvakanyanya kuti utandare @thebeancup nesu (uye ini ndichachengeta makapu achiuya!).
Gumiguru 5, 2009 na3: 12 PM
Ndinovimba nerubatsiro kubva kune ino post, iyo kambani iri mubvunzo ichadzoka kutenderera. Hukama hunoita izvozvo nguva nenguva.